CHINAPLAS2019 Yakanaka Zvishandiso- TPU Firimu Yekuwedzera Mutsara CHINAPLAS2019 Yakanaka - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
CHINAPLAS2019 Yakanaka Zvishandiso- TPU Firimu Yekuwedzera Mutsara CHINAPLAS2019 Yakanaka
Nguva: 2019-05-16 Hits:
1,Yepamberi dehumidifying uye yekuomesa unit yakagadzirirwa kuona yakagadzikana mhando, hapana bubble ichave iripo mupurasitiki iyo inobatsira kujekesa kwekupedzisira chigadzirwa. Mativi maviri echiteshi chiteshi akazaruka anowanikwa kune imwe nhanho yekumhara, iyo inovandudza muchina inochinja mashandiro uye kudzikisa mutengo wekugadzira.
2,Zvichienderana necustomised mbishi zvinhu, Jwell anoshandisa zvizere kwayo kwenguva yakareba sikuruwa kugadzira uye bvunzo ruzivo, isu tinogadzira 50 65 75 90 105 110 130 screw neLD 30 33 36 kuburitsa ese marudzi eTPU zvinhu. Iko extrusion performance inoshanda chaizvo uye kumanikidza kwakadzikama. Nitriding uye yakanamirwa pamadziro sikuru ine hupenyu hwakareba nguva uye yakanaka plasticizing, iyo inobatsira kubvisa hove ziso rechigadzirwa.
3,TPU T-kufa inoitwa nekambani yeJwell inotora Germany brand brand simbi. Hukukutu uye kumanikidza kutsungirira kunosvika kune dzimwe nyika mwero. Yakavakirwa-mukati kupisa katuriji inobatsira chaizvo kudzora chando tembiricha yenharaunda yega yega. Kuyerera kwayo kwekunze kwakafanana uye kuri nyore kugadzirisa uye kushanda. Kugadzira kwakanaka kubva kuCCC kubva kuGerman, Korea, Japan uye yakanyatsogadzirirwa T-kufa yemukati chiteshi kubva kudhijitari 3D simulation kuyerera inoshanda pamwe chete kune yakanaka mhando.
4,Iyo matatu-roller mhando inotonhora nzira inogamuchirwa, uye pamusoro peiyo roller yakanyatsogadzirirwa TPU nekumhanyisa anti-adhesive layer, matte kutsakatika, nezvimwe.
Iko mukati mevatatu vanodziya kwakatonhora nemvura, uye yakasarudzika mumhanyi dhizaini ine yakanyanya yakaderera tembiricha mutsauko pamusoro peiyo roller, iyo inovimbisa yunifomu kutonhodza kwechigadzirwa uye kushoma kweukobvu shiviriro. Independent chiuno kudzora system, iyo inogona kunyatso kudzora tembiricha yega yega roller, yakazvimirira yeJapan servo mota kutonga, zvakasununguka kugadzirisa kumhanya, uye kubatsira maitiro akagadziriswa.
5,Nyanzvi yekutsvagisa uye kusimudzira kwakawanda-chizvarwa winder, yemahara switching yepakati ichitenderera uye kukweshera ichitenderera, kuchengetedza vashandi, kuwedzera mutsara kumhanya, yakasarudzika maitiro ekudzora kusagadzikana, kusangana kwakasiyana kwevatengi zvinodiwa.
Tine akawanda TPU muchina mufekitori yedu yakagadzirira kununurwa, gamuchira pasi rese mutengi kutishanyira.
KUMASHURECHINAPLAS2019 Yakanakisa Midziyo - Imwe Mould Double Outlet PP Hollow Kuvaka Template Kugadzira Line
NEXTZvishandiso - JWZ-BM30F / 160F / 230F Kuyangarara Bowl Ridzai Kuumbwa Machine